AMAGCISA AHLUKENEYO: UKUGQALWA KWEALBHAMU YEGATSBY ENKULU - IINDABA
Isandi esenziwe kwifilimu ka-Baz Luhrmann yokuguqula inoveli ka-F. Scott Fitzgerald yayilawulwa ngu-Jay-Z, owabona ibali njengebali eliqhelekileyo lomnqweno. Kodwa isiphumo, esineengoma ezintsha nezikhutshwe ngaphambili ezivela kwi-xx, iBeyoncé, uFlorence Welch, kunye nokuninzi, ziyabukeka kwaye azonwabisi.
Umxholo ongasemva kwesandi esiya kulungelelaniso lwebhanyabhanya kaBaz Luhrmann IGastby enkulu Wazalwa xa imvula egqithisileyo yamisa ukufota eSydney, eyanika umlawuli ithuba lokudibana nayo UJay-Z . Le yokugqibela yabona UGatsby njengengxelo yomnqweno (jonga inoveli Ukungena kweRap Genius ), kwaye wacenga uLuhrmann-- oveliso yakhe yefilimu eyilelwe ukuzoba abaphulaphuli kumdlalo weqonga lasendle- ukuba isandi esiphefumlelweyo sehip-hop sasiyindlela efanelekileyo yokuhambisa ukonwaba kunye nobutsha 'bejazz yeFitzgerald age 'kubabukeli banamhlanje.
UMichael ujika i-larkin grimm
Kodwa uJay-Z kunye nomphathi womculo u-Anton Monsted khange bazibophelele kumxholo; Ingoma kaJay yokuvula, 'i-100 $ yeBhili', kunye nokufakwa kwakhe kunye Kanye West Ayinakuphikwa into yokuba 'Akukho Cawa isendle' kuphela kweendlela zomculo zerap apha, nezinye ezimbalwa, iingoma zompopu ezixhonywe kwizambatho zoluhlobo. Mhlawumbi ibonisa u-Jay-Z ubuchule be-Gatsby-efana nentlalontle, evumela wonke umntu ukuba athathe inxaxheba kumbono wakhe ngelixa ehlala kakhulu embindini wawo, evuyela impembelelo yakhe. Nokuba yeyiphi na, 'i-100 yeedola iyaseta ithoni: UBenjamin Franklins ugcwalisiwe, usongelwe nje ukonwaba / Ukuhamba de ube mfiliba de ndingaziva, okanye ndinokuyipopola le pilisi, uJay udlwengula ngendlela ye-cavalier ngaphezulu kwe-woozy, stututing beat. Icala lokonwaba leplati yeqela lihlala lingachukunyiswanga kwisandi sonke, esihamba phambili nge-blast bombast.
Isebenza kwisiqingatha sika-Beyoncé kunye no-Andre 3000 sika-Amy Winehouse's Back to Black, engengoma ingoma onokuyizisela intlekele engaphezulu. Ngaphezulu kwe-slurp elula ye-EDM- isetyhula swoop yehelikopta ejikeleza iphantsi- kukho ukuziva kancinci, ukujija kwimveliso kunye nokujika kwabo kwezwi. Ngapha koko, uthando lujika lube 'yimfama' kuJack White kwisigqubuthelo esigqibeleleyo sokubekwa kuka-U2 'Uthando bubumfama', ukucaphukisa uEmeli Sandé kunye nesigqubuthelo se-jazz-lite esi-buthu-kodwa-esimnandi, se-jazz-lite seCrazy in Love, ukugula kuyaqhubeka Ngaba Ukuhlambalaza izandla ze-jazz ze-EDM, Bang Bang, kunye narcotic ekuchazeni kwakhona i-Ferry ye-Roxy Music's Love Ngaba sisiyobisi. Iyathetha ngendlela ekhulelwe ngayo le ngqokelela yokuthanda izinto zakutshanje kukuba ingqumbo eneminyaka engama-67 ubudala ingoma emalunga neminyaka engama-40 yeyona nto inesondo apha, eyona ndawo iphambili yesixhobo sokudlala, i-blockbuster bacchanal esibonisa ukungabikho okumangalisayo intelekelelo phakathi kwento ekufanele ukuba yicream yesityalo sep.
Akumangalisi, uFergie, u-Q-Tip kunye no-GoonRock Iqela elincinci alizange libulale mntu (Yonke into esinayo) yinto engabonakaliyo, i-cartoonish ithatha i-EDM, i-twist, kunye ne-punch; Imvumi yeQuadron uCoco O Apho kubethwa Ngumoya kukhaphukhaphu, uPaloma Ukholo olunamatyala; UNero do Nero, kunye no-Lana Del Rey's Young and Beautiful yile nto ubuya kuyilindela ingoma ka-Lana Del Rey ebizwa ngokuba ngu-Young and Beautiful ukuba ivakala ngathi, phantsi kwe-yep, * ngenene waya khona umgca, Obo buso, bundenza ndifuna ukuya ethekweni. Imvumi ekucingelwa ukuba inobugcisa obubonisa ukungabikho kombono otyhafisayo nguFlorence Welch, oPhezu koLuthando kuqala eyibhaladi encinci, engcangcazelayo ngaphambi kokuba abeke into eyoyikisayo, ekhwaza ukuze asebenze ekhwaza ireferensi yeyona nto icace gca. jonga ukukhanya okuluhlaza / ndiyakubona emehlweni akho.
yangoku 93 iindudumo zengqondo egqibeleleyo
I-xx kunye neGotye zizisa kuphela ukubanjwa kwayo nantoni na esondela eluntwini kwisandi; eyokuqala kumzamo odikayo kancinane kwiziteyki eziphezulu zokumisa ngokudibeneyo, eyokugqibela kwi-Intliziyo yakhe eyintsonkothileyo ye-2007's Heart's a Mess, apho waphantse waphikisana noBryan Ferry ngokujika kwezwi lokwenyani (nokuba ufika apho ngokungxola njengoSting). Akukho Fitzgerald okanye uLuhrmann UGatsby malunga nobuqili, ngokuqinisekileyo; Ubukrwada sisitshixo, esinengoma eninzi. Kodwa akukhathaleki nokuba zingakanani na iingoma, ziyasilela ukubonelela ngento eyahlukileyo kumava amnandi okanye amanzileyo- isiphumo esidibeneyo kukudibanisa kunye nokuqhekeka. Eli cwecwe liyamangalisa. Ayizukuba yeklabhu oyaziyo? Yeyokuqhuba ngeefestile ezantsi. Ndikucebisa ukuba uthenge imoto yesandi, okanye ibhayisekile- into ehamba, U-Jay-Z uthe . Uninzi lweemoto ngaphakathi Igatsby enkulu Ukuphazamiseka kwaye kunjalo nengoma kaLuhrman.
Abefundisi ukuhendwa kansas
Uluhlu oluphezulu lweengoma zika-2016
I-Nicki minaj eprintiweyo epinki
chris mac utata kelly
Uluhlu lwengoma yeTrm songz